Safal Khabar - अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय उर्जा संघको विश्व भेला यूएइमा सुरु, नेपालबाट मन्त्री पुन सहभागी
अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय उर्जा संघको विश्व भेला यूएइमा सुरु, नेपालबाट मन्त्री पुन सहभागी
शनिबार, २६ पुष २०७६, १९ : ४९
यूएई । अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय उर्जा संघ (आइरेना) को १० औं वार्षिक सम्मेलन संयुक्त अरब इमेरेट्को अबुधावीमा शनिबार सुरु भएको छ ।
विश्वका १ सय १० भन्दा बढी मुलुकका उर्जामन्त्रीहरुको सहभागिता रहेको सम्मेलनमा नेपालबाट उर्जा, जलश्रोत तथा सिञ्चाइमन्त्री वर्षमान पुन नेतृत्वको पाँच सदस्यीय टोली सहभागी छ । यस्तै प्रतिनिधिसभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्यहरु राधाकुमारी ज्ञवाली, राजबहादुर बुढा र भूमि त्रिपाठी पनि सहभागी हुनुहुन्छ । सम्मेलनको उदघाटनशत्रपछि आयोजित अन्तरक्रियामा बोल्दै मन्त्री पुनले नेपाल नवीकरणीय उर्जाको श्रोतमा धनी रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री पुनले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण जलविद्युत क्षेत्रमा नयाँ चुनौती खडा भएको चर्चा गर्दै दिर्घकालिन सोच र योजनासहित उक्त परिस्थितिको सामनाका लागि विश्व समुदायको ध्यानकर्षण गराउनुभयो । आर्थिक र प्राविधिक हिसाबले नेपालमा तत्कालै ४२ हजार मेगावाट क्षमताको जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिने सम्भवना रहेको उहाँले औंल्याउनुभयो । हाल १३ सय २६ मेगावाट राष्ट्रिय ग्रिडमा रहेको र २५ सय मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरु र ६ सय मेगावाट सौर्य उर्जा निर्माण क्रममा रहेको जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै १८ हजार मेगावाटभन्दा बढी अध्ययनका क्रममा रहेको उहाँको भनाइ थियो । ८८ प्रतिशत जनताको विद्युतमा पहुँच पुगेको छ र त्यसमध्ये करिब १० प्रतिशत योगदान नवीकरणीय उर्जा (साना जलविद्युत आयोजना, सोलार) बाट भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नवीकरणीय उर्जाको क्षेत्रमा इरिनाको अर्थपूर्ण सहयोगको अपेक्षा गर्दै थप लगानी , शुलभ र पहुँचयोग्य प्रविधिमा विशेष ध्यान दिन इरिनालाई विशेष आग्रह गर्नुभयो । सम्मेलन प्रभावकारी र नतिजाउन्मुख योजना बनाउन तथा बजेट तय गर्न प्रभाव सक्षम हुने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्री पुनले सम्मेलन पूर्ण सफलताको कामना गर्नुभयो ।
‘अधिकार प्राप्तिमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण’ – मन्त्री पुन
मुलुकमा स्थिरता कायम राख्न र नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई बलियो बनाउन सञ्चार माध्यमको भूमिका...
दुई वर्षभित्र सबैलाई विद्युत् : उर्जा मन्त्री पुन
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी...
ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन : समयमै काम नगर्नेको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्नु
ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग, कम्पनी...
तीन वर्षभित्र बाह्र प्रतिशत जनतालाई नवीकरणीय ऊर्जा
१. स्वीस बैंकमा प्रधानमन्त्रीको खाता नभएको सचिवालय स्पष्टोक्ति
२. देवघाटमा बोलबम मेला नहुने
३. जोरबिजोरको नियमलाई कडाइका साथ पालना गराउन चेकजाँचलाई तिव्रता
४. मनकारी विनोद चौधरी : सिजी मलमा ४ महिनाको भाडा छुट
५. सडक सञ्जालमा देखिने गरी काम गरिरहेका छौँ : भरतपुर महानगर प्रमुख रेनु दाहाल
६. नेकपाभित्रको अन्तरसङ्घर्षको मूल्याङ्कन
७. बर्सेनि पहिरोकै पिरलो, वर्षाले झनै जोखिम बढायो
८. कालीगण्डकीमा टिपर खस्दा चालक बेपत्ता
९. प्रधानमन्त्री ओलीले शंकर पोखरेललाई भने ‘ए, तपाईं पनि नेता हुनुभएछ, हैन त ?’